Germany oo noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo gudba wareegga 16-ka Koobka Adduunka Haweenka ee 2019 – Gool FM
Germany oo noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo gudba wareegga 16-ka Koobka Adduunka Haweenka ee 2019
(World) 13 Juunyo 2019 – Xulka qaranka Germany ayaa noqday xulkii ugu horreeyey ee u soo gudba wareegga bug-baxa 16-ka Koobka Adduunka ee dumarka sanadkan 2019.
Germany ayaa guruubka B ee koobka Adduunka haweenka kula jira xulalka Spain, China iyo South Africa.
Kulankii ugu dambeeyey heerka guduubyada waxa ay gabdhaha Jarmalku 1-0 uga adkaadeen dhiggooda Spain, taasoo ka dhigan inay guul gaareen labo kulan oo xiriir ah.
Waxa ay haatan lix dhibcood ku hoggaaminayaan guruubka B, halka gabdhaha Spain iyo kuwa China ay leeyihiin min saddex dhibcood.
Kulankii goordhow soo gabagaboobay ee gabdhaha Shiinuhu 1-0 uga adkaadeen South Africa ayaa ka dhigay in xulka Gabdhaha Germany ay noqdaan xulkii ugu horreeyey ee u soo baxa wareegga bug-baxa ee 16-ka Koobka Adduunka ee haweenka 2019.
Gabadhaha Germany waxa ay kulankooda ugu dambeeya la leeyihiin 17 bishaan xulka South Africa oo laga badiyey labadii kulan oo ay ciyaareen, balse kulankaasi macno badan uma sameynayo maadaama xitaa haddii laga adkaado ay xaqiijiyeen gabdhaha Jarmalku inay u soo gudbeen wareegga 16-ka Koobka Adduunka ee dumarka.
Yeelkeede, xulalka Shiinaha iyo Spain oo haatan min saddex dhibcood wadaaga ayaa ku tartami doona xulkii ku soo bixi lahaa kaalinta labaad, marka ay labadaan xul wada ciyaarayaan kulankooda ugu dambeeya heerka guruubka 17-ka bishaan.
Waakee magaca ciyaaryahanka ay xalay ku qeylinayeen Taageerayaasha Real Madrid in la keeno kooxda, kaddib imaatinka Hazard?